Nei Peji Yekumhanyisa Yakakomba? Kuedza Kwako uye Kuvandudza Yako | Martech Zone
Mazhinji masaiti anorasikirwa nehafu yevashanyi vavo nekuda kwekunonoka peji kumhanya. Muchokwadi, iyo yepakati desktop desktop peji bounce rate iri 42%, avhareji nharembozha yewebhu peji bounce mwero ndeye 58%, uye avhareji post-tinya landing peji bounce mwero masosi kubva 60 kusvika 90%. Kwete yekunyepedzera manhamba nechero nzira, kunyanya tichifunga nezvekushandisa nhare kuri kuramba kuchikura uye kuri kuramba kuchinetsa nezuva rekukwezva nekuchengetedza kutarisisa kwevatengi.
Zvinoenderana neGoogle, avhareji peji rinotakura nguva yeiyo mapeji ekumusoro ekumusoroichiri a usimbe 12.8 masekondi. Izvi zvinosanganisira nzvimbo panowanikwa nharembozha internet uye kumhanya kwe4G ndeimwe yepamusoro-soro pasirese.
Avhareji peji kumhanya iri kureba, tichifunga nezve 53% yevashandisi vanosiya mapeji mushure memasekonzi matatu chete - uye zvinongowedzera kubva ipapo:
Ndeipi yakanaka peji mutoro kumhanya, ipapo? Pedyo-pakarepo.
Neraki, pane mhinduro. Tisati tasvika pane izvo zvakadaro, ngativhurei zvimwe pamusoro pekukosha kwekukurumidza peji.
Nei Peji Yekumhanyisa Nyaya
eMarketer inoratidza kuti mu2019 epasi rese yedhijitari kushambadzira mari inodarika $ 316 bhiriyoni uye inongotarisa kuwedzera kune iro rinotarisirwa ramangwana:
Zviripachena, mhando dziri kushandisa yakawanda mari kushambadziro uye kutarisira kuwana zvakazara kubva mubhajeti yavo. Asi, kana vanhu vakadhinda shambadziro - uye iyo post-tinya kumhara peji inokundikana kutakura ipapo ipapo - vanogona kudzvanya kumashure mukati memasekondi mashoma, uye nekudaro, bhajeti revashambadzi rakaparadzwa.
Iko kukosha kwemitengo ye peji kumhanya kwakakura uye iwe unofanirwa kunyatso ita peji kumhanya kukoshesa kuenda kumberi. Heano mashoma metric uye mapoinzi ekufunga paunenge uchiongorora ako edhijitari kushambadzira macampaign:
Kwete chete iyo inononoka peji mitoro inoshungurudza vashandisi, asi zvakare inokonzeresa Hunhu Zvikoro kutambura. Sezvo Hunhu hweMhando hwakanangana zvakananga neyako chinzvimbo chekushambadzira, uye pakupedzisira izvo iwe zvaungabhadhara pakudzvanya kwega kwega, peji inononoka-kurodha zvakasununguka inoderedza zvibodzwa.
Kana vanhu vashoma vari kunamatira vakamirira kuti peji rako riite, vashoma vanhu vari kuwana mukana wekushandura. Vari kusiya peji rako vasati vaona chako kupihwa, mabhenefiti, kufona-kune-chiito, nezvimwe.
Mukutengesa, semuenzaniso, kunyange a sekondi-imwe kunonoka mune nharembozha nguva inogona kukanganisa kutendeuka kusvika kusvika makumi maviri muzana.
Pakati pegore ra2016, nharembozha yekushandisa yakapfuura desktop desktop muhuwandu:
Nevatengi kushandisa nguva yakawanda parunhare, vatengesi nevashambadzi vaive (uye nanhasi) vakamanikidzwa kuchinjika. Imwe nzira yekuendesa nhare-dzakagadziriswa mushandirapamwe ndeyekugadzira-kurodha-kurodha mapeji.
Izvo zvinotisvitsa ku # 1 peji yekumhanyisa mhinduro inogadzirisa yega yeiyi nyaya.
AMP Kumhara Mapeji Wedzerai Peji Kumhanya
AMP, iyo yakavhurika-sosi fomati yakaunzwa muna2016, inopa nzira kune vanoshambadzira kuti vagadzire mheni-inokurumidza, inotsvedza-kurodha nharembozha mapeji ewebhu ayo anokoshesa mushandisi-ruzivo kupfuura zvimwe zvese.
Semutungamiri mune post-click optimization, Instapage inopa kugona kugadzira post-tinya kumhara mapeji uchishandisa AMP fomati:
With the Instapage AMP anovaka, vatengesi nevashambadzi vanogona:
Gadzira AMP post-tinya kumhara mapeji akananga kubva kuInstapage chikuva, pasina anovandudza
Validate, A / B bvunzo, uye ubudise mapeji e AMP kuWordPress kana dunhu retsika
Nunura zvirinani mafoni zviitiko, wedzera Hora Zvikoro, uye kutyaira kwakawanda kutendeuka
Iyo yechimurenga yekunzwa rubatsiro kambani Eargo yaona zvisingaite mhedzisiro kubvira yaishandisa AMP mune yayo post-tinya chiitiko:
AMP Kumhara Mapeji ane Instapage
Pamusoro pekuvaka mapeji e AMP neInstapage, pane dzimwe nzira dzinoverengeka dzaunokwanisa kusimudzira peji kumhanya. Heano matatu acho kuti utange.
3 Dzimwe nzira dzekuvandudza Yekumhanyisa Peji
1. Wedzera peji yekumhanyisa maturusi
Peji Yakawanikwa Insights ndeyeGoogle yekumhanyisa bvunzo inoratidzira peji rako kubva pa0 kusvika zana mapoinzi:
Kugovera kunoenderana nematanho maviri:
Nguva yekumusoro-iyo-iyo mutoro (iyo yakazara nguva yeiyo peji kuratidza zvirimo pamusoro pechipfuva mushure mekunge mushandisi akumbira peji nyowani)
Nguva yekuzara-peji mutoro (iyo nguva inotora bhurawuza kuti izere zvizere peji mushure mekunge mushandisi aikumbira)
Iyo yakakwira iyo mamaki yako, iyo inowedzerwazve peji rako iri. Semutemo wechigumwe, chero chinhu chiri pamusoro 85 chinoratidza kuti peji rako riri kuita nemazvo. Yakaderera pane makumi masere nemashanu uye iwe unofanirwa kutarisa kune mazano akapihwa neGoogle kukwidza mamaki ako.
PejiSpeed ​​Insights inopa mishumo kune ese desktop uye nharembozha shanduro dze peji rako, uye zvakare inopa mazano ekuvandudza.
Funga neGoogle: Edza Saiti Yangu, yakavhurwa nePageSpeed ​​Insights timu, inongoyedza nharembozha peji, zvichipesana nezvose zviri zviviri nharembozha. Chimwe chiratidzo chekumhanya (kana kunonoka) kwemapeji ako kutakura.
Ichi chishandiso chinoratidzira yako kurodha nguva, inopa zvetsika kurudziro yekumhanyisa peji rega rega pane yako saiti, uyezve inopa iyo sarudzo yekuburitsa yakazara mushumo.
2.Mifananidzo Yakazara Zvakakwana (Kumanikidza)
Kugadzirisa mifananidzo nekumanikidza, kushandura saizi, kugadzirisa zvinhu, nezvimwe zvinogona kubatsira kuchengetedza mabheti, kumhanyisa peji kutakura nguva, uye kugadzirisa nharembozha mashandiro. Pakati pe mamwe mazano epamusoro, Google inoti bvisa zvisina basa zvidhori zvepamusoro-soro uye maGIF uye kutsiva mifananidzo ine zvinyorwa kana CSS pese pazvinogoneka.
Uyezve, izvozvi zvave nyore kupfuura nakare kose kumanikidza uye kuyatsiridza mifananidzo nekuti izvi zvigadziriso zvinogona kuita otomatiki. Semuenzaniso, iwe unogona kuve nemazana emifananidzo akakwenenzverwa uye kumanikidzwa otomatiki nechinyorwa, uchideredza basa reruoko (kana uchivaka mapeji e AMP, tag yemifananidzo yechinyakare inoita akawanda eaya akafanana optimizations otomatiki).
Kusarudza rakanakisa fomati fomati inogona kuve yakaoma nesarudzo zhinji dziripo. Zvese zvinoenderana nenyaya yekushandisa, asi heano mamwe akajairika:
WebP: Mifananidzo uye yakajeka mifananidzo
JPEG: Mifananidzo isina kujeka
PNG: Transparent mamiriro
SVG: Iconable mifananidzo uye maumbirwo
Google inokurudzira kutanga neWebP nekuti inobvumidza 30% kuwedzera kudzvinyirira kupfuura JPEG, pasina chero kurasikirwa kwemhando yemufananidzo.
3. Sarudza zviri pamusoro-pepeta zvirimo
Kuvandudza maonero emushandisi wako yewebhusaiti kumhanya kunenge kwakakosha sekuvandudza saiti inomhanya pachayo. Ndicho chikonzero kana mifananidzo yako yagadziriswa, unofanirwa kuona kuti aunzwa panguva chaiyo chaiyo.
Funga izvi: Pane mbozhanhare, chikamu chinoonekwa chesaiti chinogumira kunzvimbo diki, kumusoro kwedanga. Nekuda kweizvozvo, iwe une mukana wekukurumidza kurodha zvirimo munzvimbo iyoyo, nepo zvimwe zvinhu pazasi pekupeta kurodha kumashure.
Ongorora: Chii chinobatsira kuti AMP ive yakasarudzika ndeyekuti yakavakira-mukati kukoshesa sosi kurodha, kuona kuti chete zviwanikwa zvakakosha zvinotorwa pakutanga.
Zvinogona kuva dambudziko kudzikisa huwandu hwemifananidzo pane saiti - kunyanya kune zvigadzirwa zvekutengesa, semuenzaniso, nezvigadzirwa zvakawanda - asi zvichiri kukoshesa kudzikisira kudzikisira mhedzisiro yemifananidzo panguva yekutakura nemaitiro matatu aya.
Wedzera peji rako nekumhanya ne AMP
Kana ako mapeji enhare ari kutambura neakakwira mabhureji emitengo uye yakaderera mitengo yekutendeuka nekuda kwekunonoka peji mutoro kumhanya, mapeji eAMP inogona kunge iri nyasha yako yekuponesa.
Kutanga kuumba post-tinya AMP mapeji kuendesa nekukurumidza, optimized, uye inoenderana nharembozha kubhurawuza zviitiko kune vako vashanyi, uye nekuvandudza yako Akanaka Zvikoro uye shanduko mukuita.
Tags: ampamp kumhara mapejimwero wekushandurwaconversion ratecompression yemufananidzomhando dzemifananidzoInstapagejpgpamapejinharembozhanharembozha peji kumhanyakukurumidza kumhanyanharembozha webhupeji muongororipage speedpeji yekumhanyisa analyzerpngzvishandiso zvekumhanyisa saitisvgfunga neGooglewebhu
Nei HubSpot Yemahara CRM iri Skyrocketing